पत्रपत्रिकाबाट – Sancharak
Home > पत्रपत्रिकाबाट
news from paper
Sancharak .com २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:४८ September 14, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ, भदौ २९ । देशका विशिष्ट पदमा रहेका व्यक्तिहरू सामान्य रोगको उपचार गर्न पनि विदेश धाउने र राज्यकोषको लाखौँ खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य हुने भएको छ । विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च राज्यकोषबाट नव्योहर्ने व्यवस्था गरिएका विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । संसदीय समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार विधेयक ‘फुल हाउस’बाट पाति भए विशिष्ट
सुत्केरीले एक बर्षसम्म बिदा पाउने
Sancharak .com २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:४५ September 14, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ, भदौ २९ । सुत्केरी महिलाले एक बर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने भएका छन् । संसदको स्वास्थ्य शिक्षा समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलपछि प्रसूति बिदा अपूग भए चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक बर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने व्यवस्था गरेको हो । यो खबर आजको कान्तिपुरमा
कीर्तिपुरमा किन उड्न छाड्यो बेलुन ?
Sancharak .com २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:३७ September 14, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ, भदौ २९ । बिहानको ६ बज्दानबज्दै कीर्तिपुरबासी धेरैको आँखा आकाशतिर हुन्थे । बच्चाहरु त कौशीमा गएर बेलुन कहाँसम्म पुग्छ भनेर देखिन्जेल हेर्थे । दुई महिनासम्म कीर्तिपुरको आकाशमा उडेको बेलुन भने आजकाल नदेखिने गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसमको जानकारी लिन वेदर बेलुन अर्थात रेडियो सोन्ड उडान थालेको थियो । त्रिभुवन
निर्मला हत्या प्रकरणः ‘अब एसपी र डिएसपीको डिएनए जाँच’
Sancharak .com २८ भाद्र २०७५, बिहीबार ०८:३५ September 13, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
कञ्चनपुर, भदौ २८ । निर्मला पन्त हत्याकाण्डका दोषी बचाउन र घटना ढाकछोप गर्न प्रहरी नै सक्रिय रहेको भन्दै उनका आफन्तले कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख एसपी डिल्ली बिष्ट र डिएसपी ज्ञानबहादुरको सेठीको डिएनए परीक्षण गर्न माग गरेका छन्। प्रहरीले दोषी भनेर सार्वजनिक गरेका दिलीप बिष्ट निर्दोष ठहर भएपछि स्थानीयले दोषी बचाउन निर्दोष फसाउने
Sancharak .com २८ भाद्र २०७५, बिहीबार ०८:३२ September 13, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
बारा, भदौ २८ । बारामा मन्दिर छोएको निहुँमा दलित समुदायमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । पावरवाानीपुर गाउँपालिका ३, लिपनीमालस्थित मन्दिर दलित बालकले छेएको भन्दै कुटपिट भएको हो । स्थानीइ गैरदलितको कुटपिटबाट समुन राम, उनका दाजु उमेद र भनिज आकाश गम्भीरु घाईते भएका छन् । उनीहरुको उपचार पर्साको बहुअरीस्थित वीरगन्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा भईरहेको छ
निर्मला हत्या प्रकरण थप रहस्यमय बन्दै
Sancharak .com २८ भाद्र २०७५, बिहीबार ०८:२८ September 13, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
कञ्चनपुर, भदौ २८ । कञ्चनपुर भिमदत्तनगरकी १३ वर्षीया वालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण थप रहस्यमय बन्दै गएको छ । प्रहरीद्धारा निर्दोष व्यक्तिलाई दोषीका रुपमा पस्कनु र छानविन समितीका सदस्यले एकाएक राजिनामा दिएर पुनः काममा फर्किनुले घटना रहस्यमय बन्दै गएको छ । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले प्रहरीद्धारा घटनामा दोषी भनिएका दिलिपसिंह विष्ट साधारण तारेखमा रिहा
कर्मचारी बढुवाको आधार : क्षमताभन्दा ज्येष्ठता बढी उमेरका
Sancharak .com २० भाद्र २०७५, बुधबार ०७:५७ September 5, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ, भदौ २० । कर्मचारीको बढुवा क्षमताभन्दा बढी उमेरका आधारमा गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ९० प्रतिशत बढुवा ज्येष्ठताका आधारमा र १० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा गर्ने व्यवस्था राखिएको हो । सरकारको यस्तो निर्णय निजामती प्रशासनको भविष्यका लागि
मिश्रविरुद्व उजुरी परे नपरेको अझै गोप्य !
Sancharak .com २० भाद्र २०७५, बुधबार ०७:५१ September 5, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ, भदौ २० । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र विरुद्व उजुरी दिने समय आज सकिदैं छ । संघिय संसद सचिवालयले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्र विरुद्व उजुरी पठाउन गत भदौ ११ गते सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको थियो । सचिवालयद्धारा जारी गरिएको सार्वजनिक सुचनामा उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, थर, वतन र सम्पर्क माध्यम स्पष्ट खुलाइ भदौ २० गते
पुर्वमुख्यसचिवको पदक खोसियो !
Sancharak .com २० भाद्र २०७५, बुधबार ०७:४५ September 5, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ, भदौ २० । सरकारले पुर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई दिने भनेको पदक अन्तिम समयमा खोसेको छ । उनले केही दिनअघि एसियाली विकास बैङ्क एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले आफुलाई फिर्ता गर्नुको कारणसहितको विचार अभिब्यक्त गरेका थिए । सरकारले सोही आधारमा पुर्वाग्राही भएर आफुले पाएको पदक खोसेको डा. सुवेदीले बताए । राज्यले निरन्तर प्रतिशोध लिँदै
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ५ अर्ब ६५ करोड
Sancharak .com १९ भाद्र २०७५, मंगलवार ०७:०३ September 4, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
झापा, भदौ १९ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदराले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम हालसम्म ५ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ३१ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ पुगेको हो